ULa Bella Principessa - Utshalwa nguDa Vinci ngokutsha
by UShelley Esaak
Ukujonga ngakumbi uLa Bella Principessa
Inikwe uLeonardo da Vinci (isiTaliyane, 1452-1519). La Bella Principessa, malunga 1480-90. Umnyama omnyama, obomvu nomhlophe, ipeni kunye neyinki kwi-vellum. Ukuqiniswa ngophawu lwe-oak. 23.87 x 33.27 cm (9 3/8 x 13 1/16 in.). © I-Private Collection kunye neLumiere-Technology; tyenziswa nge mvume
Mayelana neLa Bella Principessa
Le ngxelo encinane yenza iindaba ezikhulu ngo-Oktobha 13, 2009 xa iingcali zikaLeonard zithi ziyiNtloko ye-Florentine esekelwe ubungqina bombono.
Ngaphambili eyaziwa ngokuba yiNtombazana encinane kwiProfayili kwiRevenance Dress or Profile of Young Fiancée , kwaye ikhathaza njenge "Isikolo saseJamani, ekuqaleni kwe-19th Century," iindaba ezixutywe kwimidwebo ye-vellum, exhaswe ngepaneki ye-oki, yayithengiswa kwi-intanethi ye-$ 22K (I-US) ngo-1998, kwaye ibuyelelwe ngokumalunga nomyinge ofanayo ngo-2007. Umthengi wayengumqokeleli waseCanada uPeter Silverman, yena ngokwakhe owayesebenza egameni likaSwitzerland elingabonakaliyo. Kwaye ngoko ukuzonwabisa okwenziwe kwangempela kuba iSilimanman wayebizele kulo mdwebo kwintengiso ka-1998, nangona kunjalo, ukuba yayingenasistim.
Umzobo wangaphambili wawuqhutyelwa kwi-vellum usebenzisa ipenki neki, kunye nokudibanisa kwamatshontsho amnyama, obomvu kunye namhlophe. Umbala obomvu we-vellum uzibole kakuhle ekudaleni amathoni e-skin, kunye nokudibanisa kunye nomtshini obomvu obomvu kunye nobomvu obunobumba obuhlaza kunye obomvu, ngokulandelanayo.
Kutheni le nto ibonelelwa kuLeonardo?
UDkt. Nicholas Turner, owayengumgcini we-Prints & Drawings kwi-Museum yaseBrithani kunye nomhlobo we-Silverman's, wanikela ingqalelo ekukhokelweni kweengcali ze-Leonardo. UMartin Kemp noCarlo Pedretti, phakathi kwabanye. Abafundisi babecinga ukuba kukho ubungqina bokuthi le nto yayingabhalwanga uL Leonardo ngezi zizathu zilandelayo:
I-Vellum, uhlobo lwesikhumba esenziwe kwesikhumba sezilwanyana, lunokuba yi-carbon-date. Kwaye ukuthandana nezinto eziphathekayo kwindawo engaphambili-engaziwayo-mhlawumbi-ngumsebenzi wobugcisa yinyathelo lokuqala elithathwe kwi-authentication. (Kufuneka kubekho; akukho nto iqhubekayo xa izinto zokuhlaziywa kwe-Renaissance zihlala emva kwexesha elizayo.) Kwimeko yeLa Bella Principessa , ukutshata kwe-carbon-14 kwafaka i-vellum yayo phakathi kwe-1450 no-1650. ULeonard wahlala ukusuka ku-1452 ukuya ku-1519 .
Ukuba ukhangele umbono omkhulu kumfanekiso ongentla (cofa, kwaye uya kuvula efasiteleni elitsha), uza kubona uluhlu lweendlela zokukhanyisa iinjenge ezikhanyayo ezivela empumleni ukuya phezulu kwebunzi. Qaphela umthamo ongezantsi: \_\_\_\_. Yile ndlela umntu okhohlakeleyo ehamba ngayo. Umntu ofanelekileyo wayenayo inkcazo ngale ndlela: ////.
Ngoku, yimuphi omnye umculi, ngexesha lokuhlaziywa kwetaliyane laseNtaliyane, ehamba ngesitayela sikaLeonardo kwaye wayesekhohlo? Akukho namnye ayaziwa.
I-Perspective iyinto engabonakaliyo kaLeonardo. Wayefundela imathematika yonke yobomi bakhe, emva koko.
Amaqhina emagxeni eengubo ze-sitter kunye nokukhangela kwi-headdress yakhe yenziwa ngokuchaneka kukaLeonardesque.
Jonga ngasentla. Umnqweno othile weemathematika uLeonardo wayeyi-geometry. Enyanisweni, wayeya kuba ngabahlobo abasondeleyo kunye noFra. ULuca Pacioli (isiTaliyane, 1445-1517) kwaye wenze imidwebo ye-Platonic Solids kwiDe Divina Proportione (ebhalwe eMilan; 1496-98, epapashwe eVenice, 1509). Kungenxa yelukuluko, zikhululeke ukuthelekisa amaqhina eLa Bella Principessa kule ndawo .
I-Tuscan kwisitayela sonke, nangona ukugqiba iinkcukacha ziMilanese.
Enye yezo nkcukacha ezigqityiweyo i-stade ye-sitter. Qaphela ngokugqithiseleyo umsila we-pony (okwenene ufana ne-polo pony's, emva kokuba iqokelelwe kwaye ifakwe kumalungiselelo omdlalo). Le ndlela yaziswa eMilan nguBeatrice d'Este (1475-1497), umtshakazi kaLudovico Sforza. Ebizwa ngokuba yi- coazzone , yabonisa intsimbi eboshiweyo (nokuba yinyani okanye inkohliso, njengokongezwa kwenywele yekhulu le-15) eyayiwela phantsi kwinqanaba lemva. I- coazzone yayisemfashini nje kwiminyaka embalwa, kwaye kuphela enkundleni. Kungakhathaliseki ukuba yi- Principessa ukuba ngubani, wayefudukela kwi-echelon ephezulu yoluntu lwaseMilan.
ULeonardo wayebuza umculi ohamba ngesiFrentshi ngokusetyenziswa kwesitya sombala kwi-vellum ngelo xesha.
Kubalulekile ukuphawula apha ukuba akukho mntu wasebenzisa isikhokelo sombala kwi-vellum ngexesha lokuzalwa kweNkcubeko, ngoko ke le ngongoma yokunamathela. Nabani owadala lo mzobo wayeqhuba uvavanyo. Mhlawumbi kungekhona kwinqanaba le, zithi, ukudweba umdaka omkhulu kwi-tempera eludongeni obunemiqolo, i-mastic kunye ne-gesso - ngokusesikweni, nakwiMilan - kodwa, kakuhle. Akungabazeki ukuba ucinga ukuba lo mzila weengcinga uhamba phi.
Nangona kunjalo, "elitsha" uLeonards ufuna ukuba ubungqina obucacileyo. Ngaloo mva, umzobo uthunyelwe kwiLabha yeTheknoloji ye-Lumiere ye-scanning advanced multispectral. Yabona, kwavela iminwe yeminwe "eyayingqhathaniswa kakhulu" kwiminwe yeminwe kwiSt. Jerome yase-Leonardo (ngo-1481-82), ngokukodwa eyenziwa ngexesha lo mculi asebenza yedwa. Kuye kwafunyanwa kwakhona umhlathi wesigxina.
Akukho nxalenye yale mibhalo yayingqina, nangona kunjalo. Ukongezelela, phantse yonke into echazwe ngasentla, ndoloza ngomhla we-vellum, ubungqina obunjalo. Ubunikazi bemodeli bungaziwa kwaye, ngokugqithiseleyo, lo mdwebo awunakucelwa nakweyiphi na impahla: kungekhona iMilanese, kungekhona kaLudovico Sforza, kungekhona kaLeonardo.
I-sitter encinci ithathwa njengeengcali ukuba ibe ilungu leentsapho zaseSforza, nangona kungekho Sforza imibala okanye imiqondiso ebonakalayo. Ukwazi oku, kwaye usebenzisa inkqubo yokuqedwa, u-Bianca Sforza (1482-1496; intombi kaLudovico Sforza, uDuke waseMilan [1452-1508], kunye nenkosikazi yakhe uBernardina de Corradis). UByanca wayetshatiwe ngummeli ngo-1489 kwisihlobo esikude sikayise kodwa, ngenxa yokuba wayeneminyaka eyisixhenxe ubudala ngelo xesha, wahlala eMilan kwaze kwaba ngo-1496.
Nangona umntu wayenokucinga ukuba lo mzobo ubonisa uBianca kwiminyaka emashumi asixhenxe - into engathandabuzekiyo - intloko kunye neenwele ezibophekileyo kuya kuba kufanelekile kumfazi otshatileyo.
Umzala wakhe uBianca Maria Sforza (1472-1510; intombi kaGaleazzo Maria Sforza, uMbusi waseMilan [1444-1476], kunye nomfazi wakhe wesibini, uBona waseSavoy) ngaphambili kwakucatshangelwa ukuba kungenzeka. UBianca Maria wayesekhulile, esemthethweni waza waba nguMoya oyiNgcwele oyi-Roman empress ngo-1494 njengomfazi wesibini kaMaximilian I. Yiyo yonke into enokwenzeka, umfanekiso wakhe ngu-Ambrogio de Predis (isiNtaliyane, iMilanese, ngo-1455-1508) eyenziwa ngo-1493 akafani nomzekelo weLa Bella Principessa .
Ixabiso layo liye laphuma kwixabiso lexabiso lokuthenga elilinganiselwa kuma-19K (US) kwi-$ 150 yezigidi ezingama-Leonardo. Gcinani ke engqondweni, ukuba inani eliphakamileyo lixhomekeke ekubanjweni kweengcali kunye, kwaye izimvo zabo ziyahlukana.
Inkcazo yembali yobuGcisa - iiMpawu zoBugcisa boBuchule ukusuka kwi-30,000 BC-400 AD
Uludwe lwabadala baseGrike abaculi
Abaculi abaziwayo: uGiorgio Morandi
Yiyiphi iMo Op Art Movement?
Abafuduki kunye neziNcedo zoLuntu
UHenry Fairfield Osborn